कहाँ छन् उत्तरकोरियाली राष्ट्रपति किम जोन ? मृत्युकाे खबर भाइरल बनेका बेला एकाएक भयाे यस्ताे नयाँ खुलासा — Imandarmedia.com
१फेरी बिहिबारदेखि लकडाउन सुरु हुँदै नेपलामा
कहाँ छन् उत्तरकोरियाली राष्ट्रपति किम जोन ? मृत्युकाे खबर भाइरल बनेका बेला एकाएक भयाे यस्ताे नयाँ खुलासा
काठमाडौं । उत्तर कोरियाका शासक किम जोङ उनको मृत्यु भएका समाचारहरु एकाएक भाइरल भइरहेदा अमेरिका र दक्षिण कोरियाका गुप्तचर संस्थाहरुले उनी जीवितै रहेको दावी गरेका छन् । मुटुमा समस्या देखिएपछि किमको शल्यक्रिया गरिएको र उनको मृत्यु भएको भन्दै आइतबारदेखि समाचार भाइरल भइरहदा अमेरिका र कोरियाका गुप्तचर संस्थाले उनी जीवितै रहेको अर्काे खुलासा गरेका हुन् ।
वासिङटन पोष्टले तीन सरकारी अधिकारीहरुलाई उद्धत गर्दै अमेरिकी तथा दक्षिण कोरियाली गुप्तचर संस्थाका अनुसार उनी अझै जिवित नै रहेको उल्लेख गरेको छ । समाचारमा उल्लेख भएअनुसार अमेरिकास्थित उत्तर कोरियाको निगरानी योजना ३८ – नर्थले गत साता उत्तर कोरियाको वोन्सानमा किमको रेल रोकिएको स्याटेलाइटको फोटो सार्वजनिक गरेको छ ।
गत साता किम जोङ उन सोही क्षेत्रमा रहेको दक्षिण कोरियाको गुप्तचर अधिकारीले पनि बताएको समाचारमा दावी गरिएको छ । उत्तर कोरियामा पछिल्लो समय भएका विविध समारोहमा किमको उपस्थिती नभएकाले पनि किमको मृत्यु भएको आशंका गरिएको थियो । बाहिरी विश्वबाट अलग रहेको उत्तर कोरियाबारे वास्तविकता भने कसैलाई थाहा छैन। त्यसैले खबरहरु रहस्यमय बनेका हुन।
किम अप्रिल १५ मा उनको हजुरबाको जन्म जयन्ती तथा शनिवार त्यहाँको सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा समेत अनुपस्थित थिए । उनको उपचारका लागि भन्दै चिनियाँ बरिष्ठ चिकित्सकहरुको टोली समेत त्यहाँ गएको दावीसहित रोयटर्सले समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
यस्तै सर्वोच्च नेता किम जोङ उन विरामी परेको समाचारहरु बाहिरिएपछि उनकै बहिनी यो जोङ चर्चामा आएकी छन् । सन् २०१८ मा दक्षिण कोरियाको पियोंगचांगमा आयोजित ओलम्पिकको दौरान पहिलो पटक चर्चामा आएकी उनी दाई किम विरामी परेपछि किमकै उत्तराधिकारी भन्दै उनको चर्चा सुरु भएको हो।
पिता किम जोङ इलकी सबैभन्दा प्यारी छोरीको रुपमा चिनिने उनको बिद्यालय शिक्षा स्विट्जरल्यान्डमा भएको अमेरिकी अखवार वासिङटन पोष्टले जनाएको छ । उत्तर कोरिया फर्कनुअघि सन् २००० को शुरुतिरै उनले व्यालेटको प्रशिक्षण पनि लिएको बताइन्छ ।
पछिल्लो समयमा आणविक हातहतियार विकास कार्यक्रमलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय तनाव चुलिँदै गइरहेपनि उत्तर कोरियाको ‘इभान्का ट्रम्प’ को उपनाम पाएकी किम यो जोंङले गत महिना मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र अफ्नो दाजुबीच विशेष व्यक्तिगत सम्बन्ध रहेको खुलासा गरेकी थिइन् ।
यो–जोङलाई किमले वर्कर्स पार्टीको पोलिटब्यूरो सदस्य बनाउँदै निर्णायक अधिकारहरुमा पनि सह्रिक हुने गरी ३ बर्षअघि बढुवा गरेका थिए । सन् १९८७ मा जन्मिएको योङ ६ बर्षअघि पार्टीको वरिष्ठ अधिकारी भएकी थिइन्।
विश्वलाई थर्कमान पार्ने शासक किम जोंग उनको यदि मृत्यु नै भैहाल्यो भने उनको शासन सत्तामा को आउला भन्ने कुरामा धेरैको चासो छ। नेता उनलाई केही भइहाले उनको उत्तराधिकारका रुपमा बहिनी किम यो जङलाई हेरीएको छ। उत्तरमा किम जोंग उनकी बहिनीलाई देशमा दोस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिका रूपमा हेरिन्छ।
किम यो जोंगले देशबाहिर उत्तर कोरियाको प्रतिनिधित्व गर्ने गर्छिन। गत महिना उनले आफ्नो पहिलो सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरेकी थिइन्। महत्त्वपूर्ण समारोहहरूमा पनि उनी आफ्ना दाजुसँग किमसँगै देखा परिरहन्छिन्। जानकारहरुका अनुसार नेता किमकी बहिनीले उत्तर कोरियाको सरकारमा प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएकी छिन्। गार्डियन डटकमको रिपोर्ट अनुसार देश तथा विदेशमा किमको छवि बनाउन बहिनीको ठूलो योगदान भएको विश्वास गरिन्छ।
सन् २०१८ मा दक्षिण कोरियामा शीतकालीन ओलम्पिकको समयमा किम यो जोंगले उत्तर कोरियाको प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन्। दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरियाको सैन्य अभ्यासको विरोध गरेपछि किम यो जोंगले मार्चमा पहिलो पटक विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेकी थिइन्। विज्ञप्तिमा दक्षिण कोरियालाई ”डराएको कुकुरले भुक्दै छ” भनिएको थियो। उत्तर कोरियाका मामिलाबारे जानकार विज्ञहरुले बहिनी किम योजोंगको किम जोंग उनसँग सिधा पहुँच र गहिरो प्रभाव रहेको बताउने गरेका छन।
सन् २०११ मा किम जोंग उनका बुबाको हृदयघातका कारण निधन भएको थियो। त्यसपछि उनी उत्तर कोरियाको सर्वेाच्च नेता बनेका हुन। शासनसत्ता सम्हालेपछि सन् २०१३ मा किम जोंग अनले पार्टीको बैठकबाट उनका फुपाजु च्याङ सङ थेइकलाई निकालेर निकालेका थिए। राजद्रोहको आरोप लगाएर उनलाई मृत्युदण्ड दिइयो। तानाशाही नेता किमले धेरै सैन्य अधिकृतको हत्या गरेको तथा धेरैलाई जेलमा राखेको बताइन्छ।
नेता किमको जन्म कहिले भएको थियो भन्ने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। यद्यपि, उनी १९८३ अथवा १९८४ मध्ये कुनै एक वर्षमा जन्मिएका हुन् भन्नेमा विवाद छैन। उत्तर कोरियाले जनवरी ८ मा राष्ट्रिय बिदा दिने गरेकाले उनको बर्थ–डे जनवरी ८ हो भन्ने अनुमान गरिएको छ। उनी संसारकै कान्छा राष्ट्रप्रमुख हुन् । उनी २८ वर्षको उमेरमा राष्ट्रप्रमुख बनेका थिए।
उनले उत्तर कोरियामा कम्प्युटर साइन्स पढेका थिए। कोरियाको किम इल सुङ युनिभर्सिटीबाट भौतिकशास्त्र र किम इल सुङ मिलिटेरी एकेडेमीबाट सैन्य शास्त्रमा गरी दुई विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। नेता उनसँग हुने कोरियाली सैनिकको हातमा बन्दुक नभई डायरी र कलम हुने गरेको छ। उनका साथमा रहने सैनिकहरू सबैले उनले बोलेका कुरा डायरीमा अनिवार्य रूपमा टिप्नुपर्छ। उत्तर कोरिया र उनबारे धेरै कुरा रहस्यपूर्ण छन।